12 Qof oo dhintey kaddib markii uu madfac ku habsadey maanta. [Akhris …] – Radio Daljir
12 Qof oo dhintey kaddib markii uu madfac ku habsadey maanta. [Akhris …]
Muqdisho, July 05 – Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintey Madfac maanta ku habsadey deegaan ku yaalla Xaafadda Kaaraan ee magaalada Muqdisho, iyada oo ay wali sii socdaan colaadda ka taagan magaalada Muqdisho.
Tiro aad u badan oo dad ah ayaa sidoo kale dhaawac uu ka soo gaarey Madafacaan, waxaana la geeyey dhaawacyada Cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay yaalliin Tobannaan dhaawacyo cul culus ah oo horey ugu soo waxyeelloobey dirirta ka aloosan xarunta Soomaaliya.
Lama garanayo illaa iyo iminka cidda soo riddey Madfacaan hase yeeshee waxaa uu ka yimid jaha ka mid ah goobaha ay isku horfadhiyaan degmada Kaaraan ciidamada dawladda iyo kooxaha ka soo horjeeda.
Dhinaca kalena dagaallo Goos goos ah ayaa maanta markale ka sii socdey magaallada Muqdisho deegaanno ay ku jirto degmada Kaaraan ayaa wali waxaa isku hor fadhiya dhinacyada iska soo horjeeda waxaana muuqata in la soo riixayo ciidamada dawladda iyaga oo saaka Banneeyey Aagga Bangigii dhexe.
Waxaana ka barokacay dadkale maanta oo degana Degmada Kaaraan halkaas oo dhawr iyo toban sano aan marnaba laga qaxin, waxaana ay tani u dirtey farriimo ku aaddan in ay baro kacaan dad ku dhaqan xaafado nabdoon oo deris la ah degmada Kaaraan maaddaama la filan karo mar walba in uu dagaalka uu sii baaho.